Super Learning – Manokranti Centre
दुई अंग्रेजी शब्द मिलेर बनेको छ Super Learning, यहाँ सपुरको अर्थ हो– छिटो–छरितो र लर्निङ्गको अर्थ– सिकाइ ।
सुपर लर्निङ्ग (Super Learning)
दुई अंग्रेजी शब्द मिलेर बनेको छ Super Learning, यहाँ सपुरको अर्थ हो– छिटो–छरितो र लर्निङ्गको अर्थ– सिकाइ । अतः कुनै पनि कुरालाई छिटो–छरितो सिक्ने र पछिसम्म सम्झिरहने कला र विज्ञानको नाम नै सुपरलर्निङ्ग हो ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार हाम्रो मस्तिष्कमा बायाँ र दायाँ दुई गोलार्ध हुन्छन् । बायाँ मस्तिष्कको काम विचार, बुद्धि, तर्क, गणित आदि हो भने दायाँको भावना, कल्पना, सपना आदि । क्षमताकै कुरा गर्ने हो भने कुल क्षमतामा बायाँ मस्तिष्कको १० प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने दायाँको ९० प्रतिशत । र, आम मानिसहरूले आफ्नो कुल क्षमताको २–३ प्रतिशत मात्रै उपयोगमा ल्याएको देखिन्छ । सुपरलर्निङ्गमा दुवै मस्तिष्कको एकसाथ उपयोग गरिन्छ, र त सिक्ने, सम्झिने क्षमताको द्रुत विकास हुने गर्दछ ।
भन्नुपरेन यस प्रणालीमा १०० प्रतिशत मस्तिष्कलाई प्रयोगमा ल्याइन्छ ।
सुपरलर्निङ्गलाई एडुकेसन थ्रु मेडिटेसन पनि भनिन्छ । किनभने यसमा विशेष–ध्यानको विधि सिकाइन्छ जुन ध्यान विधिलाई अटोजेनिक्स भनिन्छ । अतः यसबाट तनावको बिसर्जन पनि हुने गर्दछ । अर्को कुरा, अचेल स्मरणशक्ति विकास गर्दै गिनिज बुक विश्व रेकर्डमा नाम लेखाउन पनि यसै विधिको उपयोग गरिंदै आएको छ । त्यस्तै मनोक्रान्तिका विद्यार्थीहरूले पनि विभिन्न प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । जस्तैंः उदाहरण स्वरुप दीपक नेपालले १०,००० जोक याद गर्नु, विदुर फुयाँलले १,००० वर्षको क्यालेण्डर याद गर्नु, साधक आत्मनले ५०० भन्दा वढी सामान्य ज्ञान कण्ठस्थ गर्नु आदी । अतः यो विधि शिक्षा र सिर्जनशिलताको क्षेत्रमा राम–वाण सिद्ध हुन सक्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको प्रशासन अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल पूर्ण कुमार पुलामी भन्नुहुन्छ – मेरो लोक सेवा आयोगमा सफलताको श्रेय सुपरलर्निङ्गलाई नै जान्छ ।
सुपरलर्निङ्गको इतिहास हेर्दा, बुल्गेरियाका डा. जर्जि लोजानोभको नाम अग्रपङ्तिमा आउँछ । उनी मनोचिकित्सक थिए । र त थरिथरिका मानसिक रोगीहरू उनीकहाँ आउँथे । तर अचानक ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू मानसिक समस्या लिएर उनी कहाँ आउन थाले । र, त्यो संख्या दिनानुदिन बढ्दै गयो । डा. लोजानोभले समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउन अनुसन्धान नै थाले र अन्तमा रोगको कारण पत्ता लगाई छाडे जसलाई उनले Diadactogenic Syndrome भने । जसको अर्थ हुन्छ गलत शिक्षण पद्धतिबाट उत्पन्न हुने मनोविकार । उनले पत्ता लगाएको यस रोगको उपचार आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा थिएन, र वाध्य भई उनले छुट्टै नयाँ शिक्षण पद्धतिको विकास गर्नु प¥यो जसलाई त्यसवेला Suggestology भनियो र त्यही विधि समयसँगै परिमार्जित हुँदै सुपरलर्निङ्गमा परिणत भयो ।